काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर, सर्वसाधारण सबै खुसि हुदै ! – Dainik Samchar
August 25, 2021 291
काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर, सर्वसाधारण सबै खुसि हुदै ! जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ उपत्यकामा राति ८:०० बजेपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा लगाइएको रोक हटाएको छ ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आज भएको बैठकले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि व्यवस्था गरिएको ८:०० बजेसम्मको समयावधि हटाइएको हो । उहाँले साविक बमोजिमको भदौ १६ गतेसम्म को-भिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा भने कायमै रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सवारीसाधन सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले साविक बमोजिमको भदौ १६ गतेसम्म को-भिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा भने कायमै रहेको बताउनुभयो ।
साउन २८ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्मको निषेधाज्ञाको आदेशमा उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा, ढुवानीका साधन र उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीसाधन बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधन बेलुका ८:०० बजेभित्र गन्तव्यमा पुगिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो ।
Prev१० जनालाई सोध्दा पनि पत्यारै लागेन तर जे नहोस् भनेर भगवान संग प्रथाना गरेको थिए त्यही भयो ….. (भिडियो)